आर्कचिक ऐन, जीवनको मूल | नेटवर्क मौसम विज्ञान
क्लौडी क्यासलहरू | | Divulgation, मौसम विज्ञान
आर्कचिक ऐन उल्का शावरले चिह्नित गरेको थियो
आर्कचिक ऐन त्यो समय हो जुन ह्याडिक ऐन भन्दा अघिको हो। यो लगभग 3.800 देखि 2.500 मिलियन वर्ष पहिले कभर गर्दछ। हामी अझै पनि प्र्यासम्याब्रियन सुपेरियन भित्र छौं, तर यो पहिलो हो जसमा हामी युग भिन्न गर्न सुरु गर्न सक्छौं। यसको पूर्ववर्तीले जस्तै यो सौर प्रणालीमा के भइरहेको थियो भनेर दृढ रूपमा प्रभाव पारेको थियो।
प्रेस्याम्ब्रियन प्रोटेरोजोइक 2.500 एक 540
प्रेस्याम्ब्रियन पुरातन 3.800 एक 2.500
प्रेस्याम्ब्रियन हदिक ० देखि १
यदि हडिक ऐन हाम्रो ग्रहको उत्पत्ति र शुरुआत हो भने, पुरातन ऐनको महत्त्व सुरुवात र जीवनको मूल। यो थप्नु पर्छ कि हाम्रो ग्रहको इतिहासमा प्रत्येक घटनाको लागि ठीक क्षण परिभाषित र निर्दिष्ट गर्दै, यो होईन भने, धेरै जटिल छ। अवधिहरू ज्ञात छन्, तिनीहरू परिभाषित छन्, तर फेरि जोड दिँदै, प्रत्येक घटनाको लागि सही मिति छैन। यो तर्कलाई गाईडको रूपमा प्रयोग गरेर, हामी त्यस मार्ग अनुसरण गरौं जहाँ हामी केही दिन अघि छाड्यौं।
तिनीहरू केवल कुनै ढु stones्गा होइनन्, तिनीहरू स्ट्रोमाटोलाइटहरू हुन्। शार्क बे, अष्ट्रेलियामा।
आर्कियोजोइकको रूपमा पनि चिनिन्छ, यो सबैभन्दा लामो अवधि हो जुन अहिले सम्म अस्तित्वमा रहेको छ। यो समग्रमा, हाम्रो ग्रहको कुल समयको लगभग एक तिहाइ हो। पुरानो लेखोटहरु मा, पुरातात्विक ऐन हडिकबाट भिन्न हुन मिल्दैन, दुबै अवधिलाई एकको रूपमा समावेश गर्दै। पुरातन ग्रीकबाट आएको आर्चिक नामको अर्थ "शुरुवात" वा "मूल" हो, जसको कारणले चर्चा गरिएको छ। यस कालको केही विशेषता पृथ्वीको क्रस्टको विकास थियो। यसले हामीलाई महान टेक्टोनिक प्लेट चालको बारेमा सोच्न लगाउँछ, जसले ग्रहको आन्तरिक संरचना हामी आज यो कसरी जान्दछौं त्यस्तै मिल्दोजुल्दो छ भनेर अनुमान लगाउँछ।
यस युगको कालक्रम सही तरिकाले बुझ्न यो it महान युग बीचमा विभाजित हुनुपर्दछ। प्रत्येक एक महान परिवर्तन मा तारांकित।
पुरातन नियोआरिक 2.800 एक 2.500
पुरातन मेसोर्विक 3.200 एक 2.800
पुरातन पेलियोार्सिक 3.600 एक 3.200
पुरातन इओार्सिक ,4.000,००० / 3.800०० देखि 3.600००
आर्कियोजोइकको धेरै द्रुत परिभाषा महान घटनाहरूबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ। पहिलो हेटेरोट्रोफिक र प्रकाश संश्लेषक anaerobic सेलहरू देखा पर्‍यो (साइनोबाक्टेरिया)। जैविक उत्पत्तिको पहिलो संरचनाहरू पनि सुरु हुन्छ, स्ट्रोमाटोलाइट्स। साथै पहिलो महाद्वीपहरू टेक्टोनिक प्लेटहरूको गठन र शुरुआतको साथ देखा पर्दछ। अक्सिजन वातावरणमा जारी हुन थाल्छ। र उल्का पिण्डको गिरावटको विशेषता अवधि भएको बावजूद यो त्यो अवधि हो जसमा उनीहरूको ठूलो वर्षा बन्द हुन्छ।
पृथ्वी अझै स्थिर संरचना, लाभा र eruptions मा सामान्य थियो
यो एक युग हो जुन करिब २००/200०० मिलियन बर्ष सम्म चल्यो। परामर्श गरिएको स्रोतमा निर्भर गर्दै, किनकि स्ट्र्याटग्राफीको अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले समयको तल्लो सीमालाई मान्यता दिदैन। यो बाँकी भन्दा फरक छ, जुन जुन क्षणमा पहिलो जीवित प्राणीहरू देखा पर्दछन्। यो 400..3.800 अरब वर्ष पहिलेको मिति हो। पछि, 3.700..XNUMX अरब वर्ष पहिले, पहिलो रसायनिक जीवहरू देखा पर्छन्। ती जीवहरू हुन् कि उनिहरुलाई उर्जा प्राप्त गर्न सूर्यको किरणको आवश्यकता पर्दैन.
अवस्थित तातो प्रवाह वर्तमानको तुलनामा times गुणा बढी थियोप्रचलित मौसम धेरै न्यानो थियो। यसले यो उमेरलाई मात्र परिभाषित गर्दैन, तर यसले सम्पूर्ण युगलाई चिन्ह लगायो। केवल अर्कोबाट प्रोटेरोोजिक, प्रवाह हालको भन्दा दोब्बर हुनेछ। यो अतिरिक्त तातो ग्रहको फलामको मूल को गठन बाट गर्मी को कारण हुन सक्छ। साथै यूरेनियम २ 235 जस्ता अल्पकालीन रेडियोआन्युक्लाइडहरूद्वारा रेडियोजेनिक तापको अधिक उत्पादन गर्न। ज्वालामुखीको गतिविधि उल्लेख गर्नु उपयुक्त छ जुन ज्वालामुखी विस्फोट र लाभा पिटहरू सहित विश्वभरि रहेको थियो। ती सबैले धेरै तातो ठाउँहरू निम्त्याउन जारी राख्यो।
Anoxygenic ब्याक्टेरिया देखा पर्छ। त्यो हो, तिनीहरू प्रकाश संश्लेषण गर्छन्, तर तिनीहरू अक्सिजन निकाल्दैनन्
यसले 3.600, 3.200,०० देखि XNUMX,२०० मिलियन वर्ष सम्म समावेश गर्दछ। सबैभन्दा पहिचान योग्य जीवन रूपहरू शुरू हुन्छन्। यहाँ जीवहरू विकास र पहिले नै भइरहेको छ हामी 3.460..XNUMX बिलियन वर्ष पहिलेदेखि सुरक्षित माइक्रोफोसिलहरू फेला पार्दछौं, पश्चिमी अष्ट्रेलियामा। स्ट्रोमेटोलाइट्स।
ब्याक्टेरिया प्रकाश संश्लेषण शुरू गर्दछ, सूर्यको किरणबाट उर्जा प्राप्त गर्न। सुरुमा तिनीहरू anoxygenic थिए, तिनीहरूले अझै पनि अक्सिजन दिएनन्। वर्तमानमा हामी यस प्रकारको प्रकाश संश्लेषण हरी ब्याक्टेरियामा सल्फरबाट पाउन सक्दछौं सल्फर र बैजनी ब्याक्टेरियाबाट होइन। यस किसिमको उर्जा प्राप्त गर्न लगभग पुरातन युगको अन्त्यसम्म स्थापना गरिएको थियो।
अधिक चीजहरू जुन यस युगलाई परिभाषित गर्दछ। यो सम्भव छ कि केहि क्र्याटोनहरूको मिलनले वालबारीको गठन गर्‍यो, जो काल्पनिक पहिलो सुपरमहाद्वीप हो जुन अवस्थित छ। यो नोट गरिनु पर्छ कि सबै विज्ञहरू यस अस्तित्वमा सहमत छैनन्। यो ढिलो तीव्र उल्का वर्षाको पनि अन्त्य हो। विगतका सयौं लाखौं वर्षहरूका लागि, पृथ्वीले उनीहरूलाई मार्दछ।
पहिलो बरफ युगमा ग्रहको हाइपोथेटिकल उपस्थिति
यो 3.200,२०० देखि २,2.800०० मिलियन वर्षसम्म रह्यो। काल्पनिक सुपरमहाद्वीप वालबारा खण्ड हुनेछपछि यो युग मा, Neoarchic मार्ग दिनुहुन्छ। केहि हाइलाइट गर्न केहि छ त्यहाँ पहिलो पटक पृथ्वीमा एक ठूलो हिमनदी थियो। यो कस्तो देखिनुपर्दछ भनेर कल्पना गर्न सागरमा पानीमा फलामको मात्रा धेरै हुन्छ। त्यसले यसलाई हरियो रंग प्रदान गर्दछ। र वातावरणमा अत्यधिक कार्बन डाइअक्साइडको साथ चार्ज गरिएको थियो, आकाशमा रातो टोन हुनेछ।
अन्तरमहाद्वीपीय प्लेटहरूको गठनमा नयाँ आवेगको बावजुद, तिनीहरूले १२% भन्दा बढी लिनु हुँदैन। अर्कोतर्फ, महासागरहरू बन्न बन्द हुने थिएन। तिनीहरू पुग्ने सतह लगभग पहिल्यै नै हुनेछ भोल्युमको %०% उनीहरूसँग अहिले छ.
हाइपोथेटिकल उपस्थिति जुन साइनोब्याक्टेरियाको कारण देखा पर्नेछ
पुरातन कालको अन्तिम युग र अन्त। उहाँ बीचमा बुझ्नुभयो २,2.800०० देखि २,2.500०० मिलियन वर्ष पहिले। ब्याक्टेरिया विकास गर्न जारी छ, र पहिले नै प्रकाश संश्लेषण जारी अक्सिजन सुरु गर्नुहोस्, साइनोबाक्टेरिया। यस ग्रहमा एउटा ठूलो आणविक अक्सिजनेशन सुरु हुन्छ जुन त्यसको परिणाम अर्को युगमा हुन्छ। अक्सिजनको ठूलो विषाक्त संचयले ठूलो अक्सीकरणको कारण निम्त्याउँदछ पछि
प्रोटोकन्टिनेन्टहरू त्यो अस्तित्वमा थियो, जस्तै वालबाराह, र अर्का नामले अर्का, तिनीहरू आकारमा सानो थिए। उनीहरू डेटि started गर्न थालेकाले मात्र होइन, तर किनभने यसको बोक्रा नै नविकरण गरीरहेको थियो। महाद्वीपले आफूलाई आज हामीलाई प्रस्तुत गर्ने स्थिरताको विपरीत। त्यो बेला, ज्वालामुखी देखिन थाल्यो, एक महान भूमिका खेलेको साथ, प्रभागहरू र क्र्याटोनहरू जुन आयो।
यो आउँदो दिन सम्म हुँदैन, प्रोटेरोजोइक, जहाँ अधिक जटिल जीवन रूप देखा पर्न थाल्यो।
यदि तपाइँ सबै कुराको सुरु जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ। हामी तपाईंलाई हाडिक aeon प्रस्तुत गर्दछौंहाम्रो ग्रहको सुरुवात। जहाँ यो पनि देखिन्छ, चन्द्रमाको रहस्यमय गठन।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » आर्कचिक ऐन
प्याम्पेरो, जोन्डा र सुडेस्टडा
रातमा उज्यालो, समुद्र र ज .्गलमा